मतदाता ढाँट्दै राजन भट्टराई–चावहिलवासी भन्दै ललितपुरको हाउजिङको बास | Sarathi News
मतदाता ढाँट्दै राजन भट्टराई–चावहिलवासी भन्दै ललितपुरको हाउजिङको बास
December 4, 2017 | 10:34 pm
काठमाडौ, मंसिर १८–यो तस्विरमा देखिएको सुन्दर महल कुनै व्यापारिक घारानाका व्यक्तिको होइन । सेवाको लागि राजनीतिमा गरेको भन्दै काठमाडौं क्षेत्र नं ४मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका उमेदवार राजन भट्टराईको हो । जो ललितपुरको धापाखेलमा रहेको प्रसिद्ध सिभिल होम्स्मा बस्छन् र आँफूलाई चावहिलको स्थानीय भन्दै जनतालाई ढाँटिरहेका छन् ।
निर्वाचन प्रचारका दरवियानमा राजनले पटक–पटक स्थानीय जस्तै आँफू धुलोले आजित भएको भ्रम छर्दै आएका छन् । तर, उनी वर्षौंदेखि करोडौं खर्चिर किनेको सिभिल होमको सुविधा सम्पन्न महलमा बस्छन् । धापाखेलमा रहेको सिभिल होमले निर्माण गरेको क्लोनीमा रहेको २१० नम्बरको घर राजनको हो । मतदातालाई स्थानीय रहेको भ्रममा पार्न टिकट पाएपछि करिब डेढ महिनादेखि उनले महानगरपालिका वडा नं ७ बुलबुलेमा बस्न थालेका हुन् । भट्टराइकी श्रीमति र बालबच्चा भने अहिले पनि धापाखेलमै घरमा बस्छन् ।
तपाइँलाई अझ आश्चार्यमा पार्ने अर्को सूचना छ– उनले यो भवन कसरी किने ? एमाले नेता माधब कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकारका रुपमा रहँदा उनको तलब यो घर किन्न संभव थिएन । तर, पनि सल्लाहकारकै आम्दानीले यो महल खरिद भएको हो त ?
आम मतदाताले सोध्ने र विचार गर्ने बेला आएको छ । आखिर के छ राजनको धन्दा ? सिभिल होममामा उनले करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर घर किनेका हुन् । उनले यो घर खरिद गर्न पैसा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना गम्भीर सूचना विदेशी निकायलाई बेचेर कमाएका हुन् । ती बाहेक घर किन्ने समयमा यी भारतीय दुतावास र मेडिकल माफियासँग समेत राम्रै सहयोग लिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
निप्सले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धि परियोजनाका लागि तीन करोड ४२ लाख ६१ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो । राज्यको महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम हुने गरेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता गतिविधि नियमन गर्न कठिनाई भइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयका अधिकारीले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीले राजनले गरेको कुकृत्यमा तत्काल मुद्दा चलाउँनुपर्ने अवस्था देखिएपनि राजनीतिक आवरणका कारण केही गर्न नसकिएको भन्दै निरिहता प्रकट गरे ।
सिभिल होमको क्लोनीमा उच्च आम्दानी भएका व्यापारिक घरानाका व्यवसायी बस्ने गरेका छन् । पार्टीकोकाममा भन्दा पनि कमाइ खाने धन्दामा लागेको भन्दै उनको पार्टी भित्र पनि आलोचना हुने गरेको छ । टिकट वितरणका समयमा पनि एमालेका क्षेत्र नं ४ का स्थानीय नेताले अस्वभाविक कमाई रहेका धापाखेल सरिसकेका टिकट दिनुहुन्न भनेर आवाज उठाएका थिए । तर दुतावासको दबाबमा केपी ओलीले कसैका गुनासै नसुनि राजनलाई टिकट दिएका थिए । उनले भारतीय दूतावासको कोटामै जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका हुन् ।
जनताका असल सेवक दाबी गर्ने राजनलाई भेट्न जान पनि सजिलो छैन । सिभिल होमको गेटमा पुगेपछि चौकीदारको खानतलासी र सोधपुछपछि मात्र उनको घरमा पुग्न सकिन्छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा चावहिल र कपनमा निर्माणाधिन बाटोको विषयलाई लिएर प्रतिप्रर्धि उमेदवार गगन थापाको आलोचना गर्ने गरेका भट्टराईको सिभिल होमको क्लोनीमा भने चिटिक्क परेका बाटा छन् । थापा भने रातोपुलस्थित पुस्तौनी घरमा बस्छन् ।
काठमाडौंमा निर्माणाधिन सडक संरचनालाई प्रतिस्पर्धीको आलोचना गर्दै आएका भट्टराईको चरित्र उदाब्गो भएको छ । भट्टराईले एमालेका कार्यकर्तालाई पनि ढाँट्ने गरेका छन् । ।।।धापाखेलमा घर किनेको हामीलाई पनि ढाँढेका थिए,’ कपनकै एमाले कार्यकर्ता प्रमोद ढुंगानाले भने, ‘धेरै पछिमात्र हामीले थाहा पाएका हौ ।’